I-Polysius - Kinne Maskinteknik AB
Umhlangano we-Generator ASEA
Amathangi kawoyela anamandla
Inyama Grinder yemodeli enkulu
Roll isikrini semithwalo emincane
IScania SBAT 111 S, 36190 6 × 6 iloli yoMlilo
Isahluko esihlukile sokulayisha uLong Jon
I-Tipper iloli Kockum
Amabhande okuhlangana nawo
I-Vibrator Vester Vby Vibrator
I-Polysius isando crusher.
Isitshalo sokuchoboza sePolysius sisetshenziselwe ukuchoboza i-limestone.
Ukuchotshozwa kwenzeka kusuka ebhulini lamatshe angama-3 litomu phansi kuye ngosayizi wama-40 mm ngesinyathelo esisodwa.
Ngenxa yesisindo esikhulu se-rotor, amathani angama-25 nama-flywheels amathani ayi-10, i-crusher nayo ilungele ukuchoboza ezinye izinto eziningi ezinjengemabula, i-sandstone, i-quartzite, i-dolomite, i-mica, ithenisi lethusi, i-calcite, i-talc, udaka.
I-crusher isetshenziselwe futhi ukufafaza iziqu ekwenzeni umkhiqizo we-biofuel wokuhlanganisa. Isigaxa siphinde sachotshozwa ukukhiqizwa kwama-chips amakhulu njengokunciphisa izinto ekuncibilikeni kwama-alloys e-Ferro.
Isisindo esikhulu sibuye sisho ukuthi ukusetshenziswa kukagesi kuphansi.
Isisindo se-rotor nama-flywheels cishe amathani angama-35. Rotor has imivimbo okuxekethile. Ukushaywa ngakunye kunesisindo esingu-120 kg.
Rotor Extra iyatholakala.
Isisindo esiphelele sale sitshalo esiqhobozayo singamathani angama-75.
Electric 400 kW motor.
I-crusher isuseka kalula kwezokuthutha.
I-crusher enomthamo ofanayo esinawo wokuthengisa I-FL Smidth 500 yamathani.
Gqoka ngemuva kwamathani ayizigidi ezi-3.5 zamatshe amatshe amancane.
© 2020 Kinne Maskinteknik AB • Inikezwe amandla yi GeneratePress